Who were Bengali, so called Rohingya?: တိုက်ဆိုင်မှုများ များပြားလွန်းနေသော ဒူချီရာတန်းကျေးရွာ မီးရှို့မှု
● တစ်ချိန်တည်းမှာပင် "ဒူချီရာတန်းကျေးရွာရဲ့ ဘာဘာညာ ညာ" ခေါင်းစဉ်တပ်၍ တိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကို ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၏ ဇာတ်ကွက်များထက် ပိုမိုသာလွန်ကောင်းမွန်အောင် ရေးသားဖြန့်ချိသည်ကိုလည်း (တိုက်ဆိုင်လှစွာဖြင့်) တွေ့ရှိရသည်။
● မြန်မာနိုင်ငံသည် လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းများဖြင့် ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီ၍ တည်ရှိခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးလက်ထက် သက်တမ်း(၂)နှစ်ခွဲကျော်ကာလ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတို့ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသော်လည်း မူလကတည်းက နှစ်ပေါင်းများစွာ စနစ်တကျ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော Campaign များ၏ အရှိန်အဟုန်ကား ကြီးကြီးမားမား ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ အစိုးရပြောတာ မယုံ၊ Campaign သမားများ ပြောတာကိုသာ ယုံကြည်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများ အနေနှင့်လည်း သတင်းထွက်ပေါ်သည်နှင့် မှတ်တမ်းအဟောင်းများဖြင့် တိုက်ဆိုင်ကာ သတင်းမှားများကို အဟုတ်အမှန် ဟု ထင်မြင်ယူဆခဲ့သော ဖြစ်ရပ်မှာ ဤဖြစ်စဉ်တွင် အထင်အရှား ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
● လူ့အခွင့်အရေးခေါင်းစဉ်မှာ ကမ္ဘာတွင်လည်း လွန်စွာမှပင် အော်ဟစ်၍ကောင်း၊ ကြွေးကြော်၍ကောင်း၊ ရန်ပုံငွေကောင်းလှသော Issue ဖြစ်သည်။
● အစိုးရပိုင်းမှ သတင်းများ ထုတ်ပြန်ရာတွင် နောက်ကျခြင်းများ ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနောက်ပိုင်းတွင် အမြန်ဆုံးထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ သို့သော် သတင်းမှန်များ ဖြစ်ရေးအတွက် စိစစ်အတည်ပြုရခြင်းကြောင့် အနည်းငယ် နောက်ကျခြင်းများ ရှိခဲ့ရသည်။ [သတင်းထောက်များထံ ဖုန်းဆက်၍ မဟုတ်မမှန်ရော ဟုတ်တာရော ပြောချင်ရာ ပြောနိုင်သော ယင်းတို့ကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ သတင်းအချက်အလက် ပြည့်စုံစွာ ရယူရခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။]
● ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီ၍ ထင်ကျန်ခဲ့သော ပုံရိပ်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးလက်ထက် (၂)နှစ်ခွဲကျော် အားထုတ်မှုဖြင့် အပြီးအပြတ် ချေဖျက်နိုင်ရန် မလွယ်ပါ။ သို့သော် အတတ်နိုင်ဆုံး ချေဖျက်နိုင်ရန် အားထုတ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သတင်းမှားများကို အခြေခံ၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ထုတ်ပြန်ချက်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းကြောင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
● တိုက်ဆိုင်မှုများ များပြားလွန်းနေခြင်းသည် မကောင်းပါ။ နိုင်ငံတကာကလည်း အခြေအနေမှန်ကို သိရှိနားလည်သဘောပေါက်စ ပြုလာပြီ ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် တိုက်ဆိုင်မှုများ ဖန်တီးလာခဲ့လျှင်လည်း မျက်စေ့စုံမှိတ် ယုံကြည်ရန် မလွယ်တော့သည့် အကြောင်း သဘောပေါက်ကြစေလိုသည်။
● ယင်းသို့ တိုက်ဆိုင်မှုများ ဖန်တီးနေသူတို့ကို မေးလိုသည်မှာ "ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကူညီမလား၊ ပြဿနာများ ဆိုးသည်ထက်ဆိုးစေရန် လှုံ့ဆော်နေမည်လား" ဟူ၍ပင် ဖြစ်သည်။
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 6:48 PM
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လ၀ကဥပဒေအရ ငြိစွန်းနေသော ဘင်္ဂလီ ကြံ့ဖ...
ရခိုင်တွင် အခြေအမြစ် မရှိသည့် သတင်းထုတ်ပြန်မှုများ...
ဘင်္ဂလီကုလားများ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်း ခ...
ရဲတကက အောင်ကျော်သိန်း အသတ်ခံရသော ဖြစ်စဉ်နှင့် ဆက်စ...
ကျောက်တော်မြို့တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျမှ ရခိုင်ဒုက္ခသည်မျ...
ရဲတပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦး သေနတ် (၁)လက်၊ ခဲယမ်း အချို့နှ...
Global Network Terror
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီး သတင်းဆက်
အစိုးရခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စစ်တွေမြို့နယ်အတွင်း တိတ်...
မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ တိုက်ခိုက်...
၃၀-၁၆ ရက်နေ့ထိ ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ
ကိုလိုနီခေတ် ရခိုင် အနောက်ခြမ်းမှ ဘော်တွမ်လေထံ ပေး...
ဒေါက်တာ ကိုကိုကြီး ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ..?
ရှာရီးယား ဥပဒေကို အမြည်းသဘော ဖတ်ကြည့်စေချင်၏။